Mohamed salah oo ku guulaystay xiddigii ugu fiicnaa taageerayaasha PFA ee bishii September | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Mohamed salah oo ku guulaystay xiddigii ugu fiicnaa taageerayaasha PFA ee bishii...
Mohamed salah oo ku guulaystay xiddigii ugu fiicnaa taageerayaasha PFA ee bishii September
Weeraryahanka Liverpool Mohamed Salah ayaa loo caleemo saaray abaalmarinta PFA Fans ‘Player of the Month of September.
29 jirkaan ayaa soo bandhigay qaab ciyaareed cajiib ah Reds bishii la soo dhaafay, isagoo dhaliyay goolal mid kasta oo ka mid ah kulamadii Liverpool ee bishii September ee Premier League ee ay la ciyaareen Leeds United, Crystal Palace iyo Brentford.
Marka laga reebo waxqabadyada gudaha, Salah ayaa sidoo kale dhaliyay saddex gool laba kulan oo Champions League ah oo uu la ciyaaray AC Milan iyo Porto wuxuuna ku guuleystay codad aad u badan bishii Sebtember PFA Fans Player Player of the Month.
Salah – oo sidoo kale dhaliyay goolashiisii ​​100 -aad ee Premier League ee Liverpool – isagoo ku guuleystay 69% codadka si uu ugu guuleysto abaalmarinta ka hor Ivan Toney , Cristiano Ronaldo , Antonio Rudiger , Ismaila Sarr iyo Michail Antonio .
Weeraryahanka reer Masar ayaa hadda isku diyaarinaya kulanka Sabtida ay la yeelan doonaan Watford isagoo doonaya inuu gool u dhaliyo Liverpool kulankii siddeedaad oo xiriir ah, taasoo ka dhigan rikoor shaqsiyeed cusub intii uu ku jiray xirfadiisa shanta horyaal ee ugu waa weyn Yurub.
Previous articleOdayaashii maanta la kulmay Shaakh Shaakir oo shaaciyey go’aanka uu qaatay
Next articleXiisadda dagaal ee dalalka Azerbaijan iyo Armenia oo dib usoo cusboonaatay